Madaxweyne Xasan oo tegay Baraawe “Ma ogolaan doono dhoofinta dhuxusha” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka midyihiin xubno ka tirsan labada gole ee dowladda saraakiil ciidan oo gaaray magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa goob fagaaro ah kula hadlay dadweyne aad u fara badan oo si diiran ugu soo dhaweeyay degmada Baraawe.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga la socda ayaa waxa ay halkaasi kula kulmeen odoyaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada ku nool degmada Baraawe, waxaana uu warbixin ka dhageystay dadkii uu kula kulmay garoon kubadda cagta ah lagu cayaaro oo ku yaala degmada Baraawe.
Qaar ka mid ah odoyaasha dhaqanka ee uu la kulmay ayaa waxa ay Madaxweynaha ka codsadeen in dib loo soo celiyo adeegyadii guud ee bulshada ee magaalada, maadaama in muddo ah ay halkaasi bulshada ku dhibaateyn jireen maleeshiyaadka Shabaab.
“Mudane Madaxweyne anagu hadaan nahay odoyaasha dhaqanka ee degmada Baraawe waxaan nahay dad jecel nabadda, farxad ayay nootahay in Madaxweynaha aan kuugu soo dhaweyno Degmada Baraawe ee Gobolka Shabeelaha Hoose” ayuu yiri mid ka mid ah odoyaashii la hadlay wafdiga Madaxweynaha.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidii oo la hadlay dadweynaha ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay booqashada Madaxweynaha iyo wafdigiisa ay maanta ku tegeen degmada Baraawe.
Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Cabdirisaaq Khaliif Cilmi oo isna la hadlay wafdiga Madaxweynaha ayaa uga warbixiyay xaaladda guud ee degmada Baraawe, isagoo xusay in howlgalka lagula dagaalamayo Shabaab uu halkiisa ka sii socon doono.
“Madaxweynaha waxaan ku faraxsanahay sida ay kaaga go’antahay in gacanta dowladda dib loogu soo celiyo deegaannada ay shacabka ku dhibaateynayaan bulshada, Insha Allah mudane Madaxweyne waxaan goor dhaw bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareyn doonaa in dhamaan deegaannada yar ee ay Shabaabku ku suganyihiin laga saari doono” ayuu yiri Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Daahir Aadan Cilmi “Indho-qarshe” oo la hadlay dadweynihii isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ayaa ka codsaday inay taageeraan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab, isla markaana ay gacan ka geystaan sugidda amniga.
Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Burci Maxamed Xamza ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay sida ay u soo dhaweeyeen wafdiga Madaxweynaha.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu dambeyntii la hadlay dadweynihii isugu soo baxay goobta fagaaraha ah ayaa ugu horeyn uga mahadceliyay sida ay u soo dhaweeyeen, isagoo xusay in magaalada Baraawe ay ugu dambeysay sanadkii 2002-dii.
“Dowladdu aad ayay ugu dadaaleysaa in shacabka degmada Baraawe ay helaan adeegyadii bulshada, dhalinyarada degmada ku noolna loo abuuro fursado shaqo” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan ayaa yiri “Adduunyadu waxa ay ku horumartay aqoonta dowladduna waxa ay dib u soo celineysaa sidiii dhalinyarada lagu dhiiri gelin lahaa in ay sare u qaadaan tacliinta dalka, shacabkana waxaa looga baahanyahay inay ka qeyb qaataan “mashruuca dhiso dalkaaga” oo aan rabno in gobolkasta oo ka mid ah dalka laga hirgeliyo mashruucaasi si dib loo dhiso xarumihii danta guud ee bulshada loogu adeegayay”.
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka codsaday shacabka ku nool gobolka Shabeelaha Hoose inay sare u qaadaan wax soo saarka dalaga beeraha.
“Kii Shabaabka ka tirsanaa haddii uu ka soo laabto maanta waxaan rabnaa in la cafiyo, lana dhaqan celiyo, isla markaana uu ka mid noqdo Ummaddiisa, inta ka dhiman dalkeena waan ka saareyneynaa kooxaha argagixasada” ayuu sidoo kale yiri Xasan Sheekh.
Madaxweynaha oo sii hadlaya ayaa yiri “Dowladdu waxa ay mamnuucday dhoofinta dhuxusha, dalalkii loo dhoofin jiray waan kala hadalnay arrintaaas, dowladduna ma ogolaan doonto in la dhoofiyo dhuxusha, waayo waxa ay sababaysaa nabaad guur”.
“Waxaan ku faraxsanahay in si nabad ah aad isugu soo baxdeen barxadaan oo aad ogtihiin in dhiigbadan oo xaq darro ah lagu daadiyay, markasta waxaan idinkugu dhiiri gelinayaa inaad ka shaqeysaan nabadda oo aad ka hortagtaan cidkasta oo amni darro abuureyso” ayuu hadalkiisa kusoo gebagebeeyey.
Alshabaab oo ka hadlay booqashada Xasan Sheekh ee Baraawe, waxeyna sheegeen iney gentaalo la beegsadeen diyaaradda siday madaxweynaha, ayna halis geliyeen sida ay ku qoreen baraha ay ku leeyihiin Internetka. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa si nabad ah dib ugu soo laabtay Muqdisho.